कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली सिंहदरवार’ बनाउने
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आठ वटै मन्त्रालय एउटै कम्पाउन्डभित्र बनाउने भएको छ । जसलाई ‘कर्णाली सिंहदरवार’ नाम दिइएको छ । हाल वीरेन्द्रनगर–७, इत्रामस्थित प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र केही सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । सोही ठाउँलाई घेरबार गरेर कर्णाली सिंहदरवार बनाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले जानकारी दिए । बजेटबारे जानकारी दिन आज […]
Prashasan 16 दिन पहिले
कर्णाली सरकारले ‘कर्णाली सिंहदरबार’ बनाउने
२ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठवटै मन्त्रालय एउटै हाताभित्र रहने गरी कर्णाली सिंहदरबार बनाउने भएको छ । हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –७, इत्राममा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अरु केही सरकारी कार्यालय रहेका छन् । सोही ठाउँलाई घेराबार गरेर कर्णाली सिंहदरबार बनाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले जानकारी दिए । बजेटबारे जानकारी […]
सरकारले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति बनाउने
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति बनाउने भएको छ ।
मधेस सरकारले समानान्तर प्रहरी बनाउने मन्त्री साहको चेतावनी
जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे प्रदेश सरकारले समानान्तर प्रहरी बनाउने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार जनप्रतिनिधिसँग सूचनाको हकसम्बन्धी कार्याशालामा बोल्दै मन्त्री साहले प्रहरी समायोजन नगरे संघअन्तर्गत रहेको प्रहरी कार्यालयकै छेउमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट कार्यालय खोल्ने चेतावनी दिएका हुन्। मन्त्री साहले प्रदेशबाट र संघबाट समेत प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनिसके […]
ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने निर्णय, कुन जिल्लामा बन्छ?
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
धनुषाको मुखियापट्टीमा मधेस सरकारले भ्यु टावर बनाउने
जनकपुरधाम – मधेस सरकारले देशकै सबैभन्दा होचो स्थानमा भ्यु टावर बनाउने भएको छ। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँमा भ्युटावर बनाउनका लागि अध्ययन थालेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका–२ मा भ्युटावर बनाउनका लागि अध्ययन थालेको छ। मन्त्रालयले भ्यु टावरलगायत पिकनिक स्पोर्टका रूपमा मुसहरनियालाई विकास गर्न अध्ययन थालेको हो। सोमबार प्राविधिक टोलीसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, […]
भिजिट भिसामा विदेश पु-याई अलपत्र बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्ने
बुढीगण्डकी आयोजना सरकारले बनाउने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने बताउनुभएको छ। उहाँले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण खर्चिलो हुने भएकाले राज्यले नै बनाउने बताउनुभयो। गोरखा, नुवाकोट र धादिङका जिल्लाको सीमा क्षेत्र घ्यालचोकमा निर्माण हुने उक्त, आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये एक आयोजनाको रूपमा लिइएको छ।
प्रदेश सरकारले मिडिया मैत्री ‘आमसञ्चार विधेयक’ बनाउने छ : मन्त्री थापा
गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले बनाउने आमसञ्चार विधेयक मिडियामैत्री हुने बताएका छन् । कास्कीको माछापुच्छ्रेमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले आमसञ्चार विधेयकलाई संशोधन मिडिया हाउस र मिडियामैत्री बनाएर अगाडि बढाउने बताएका हुन् ।‘प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयकलाई सरोकारवालासँग समन्वय गरेर विवाद नहुने गरी तयार गरि अगाडी बढाउँछौँ’ उनले भने, ‘गण्डकीमा सञ्चा
सरकारले संसद्लाई कहिलेसम्म 'बिजनेस'विहीन बनाउने ?
पुनःस्थापित संसद्लाई सरकारले कहिलेसम्म ‘बिजनेस’विहीन बनाउने हो भनी सांसदहरुले प्रश्न गरेका छन्। उनीहरुले संसद्लाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन्।...